Isibuyekezo se-Google Panda Algorithm
NgoMsombuluko, Mashi 7, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Nginemizwa exubile kuGoogle eyenza ushintsho olukhulu ku-algorithm yayo. Ngakolunye uhlangothi, ngiyalithokozela iqiniso lokuthi bazama ukuthuthuka… ngoba angineliseki ngemiphumela yosesho lweGoogle. Ngasekuqaleni kwanamuhla bengifuna ezinye izibalo zokubhuloga… futhi imiphumela ibimbi:
Uma ubheka imiphumela… bese uya ekhasini ngalinye kuya ekhasini, kubonakala sengathi iGoogle ayinaki kangako amasayithi amakhulu futhi inaka kakhulu amasayithi amancane. Inkinga ukuthi imiphumela engiyifunayo ifana nse. Abanye bangaphikisa ngokuthi iGoogle ngeke iqonde inhloso yami… akulona iqiniso. I-Google inomlando weminyaka emaphethini wami wokusesha. Lowo mlando uzohlinzeka ngokufakwa ezihlokweni enginentshisekelo yokulandela.
Isibuyekezo sakamuva seGoogle, esaziwa ngenye indlela njenge panda update (eqanjwe ngegama lonjiniyela), bekufanele ithuthukise ikhwalithi. Inkinga, njengoba kuchazwe ngabantu abaningi be-SEO, bekuwukuthi bebenobunzima bokuncintisana nabo amapulazi okuqukethwe. Kukho konke ukwethembeka, angibonanga empeleni izikhalazo eziningi ezivela kubasebenzisi… kepha iGoogle ibonakale ngathi icindezelwe yingcindezi yomkhakha.
Uma amasayithi wokuqukethwe amancane engakwazanga ukuncintisana namasayithi amakhulu, ngiyaqonda ngokuphelele. Noma yini evimbela intando yeningi yewebhu kufanele ilungiswe. Angikholwa ukuthi iGoogle ilungise inkinga, noma kunjalo. Kubonakala kimi ukuthi benze nje ushintsho oluseceleni ... bafaka imbobo eyodwa ngenkathi kuqhubeka ukuvuza okuningi. Ukuguqulwa kwe-algorithm kuthuthukise iphutha elikhulu - amasayithi amakhulu anenqwaba yamakhasi asezingeni eliphezulu abonakala ethola lula kumakhasi amasha.
Umagazini olandelayo, manje, manje ungamasayithi amakhulu empeleni anenqwaba yamakhasi asezingeni… kepha amaphesenti amancane wamakhasi we-crappy, manje ehla ezingeni lebhodi. Cabanga ukutshala imali kusayithi nokwakha izinkulungwane zamakhasi wokuqukethwe okuhle, bese uthola ukuthi ngobusuku obubodwa isiza sesiza sakho sehlile ngoba unamakhasi athile ahluphekayo. Ukwehla okuvelayo sekuvele kubiza ezinye izinkampani kakhulu.
Le bhulogi inamaposi ebhulogi angaphezu kuka-2,500. Impela akubona bonke abayizinto zesigaba "A". Kuyavunywa, ubukhulu bale bhulogi abuqhathaniswa namapulazi amaningi wokuqukethwe anamakhulu ezinkulungwane noma izigidi zamakhasi. Noma kunjalo, ngisekhona ukulima… Ukuzama ukwakha isikhundla sezihloko ezahlukahlukene ezifanele ukusesha, ezenhlalo, ezeselula nezinye izindlela zokumaketha. Angiqiniseki ukuthi kufanele ngidale okuqukethwe okungakanani ngaphambi kokuba ngibonwe njengepulazi lokuqukethwe… bese ngijeziswa ngokufanele… kepha angijabule kakhulu ngakho.
Izimfihlo zakudala ze-SEO bezingeyona imfihlo kangako. Bhala okuqukethwe okuhambisanayo, sebenzisa amagama angukhiye ngempumelelo, hlela amakhasi akho kahle, yakhela isiza sakho ukuze usebenzise lokho okuqukethwe… futhi uthuthukise ukuphuma kwakho. Ukusetshenziswa nokubekwa kwegama elingukhiye okusebenzayo kungakuthola emiphumeleni efanele… futhi ukukhuthazwa kwalokho okuqukethwe okungekho kusayithi kungakuthola ukhethwe kangcono. Imfihlo entsha ayaziwa ngempela. Labo bakithi abakule mboni basaphithizela ukuqonda nje ukuthi yiziphi izidingo ezenziwayo. I-Google iyathula kuyo, futhi, ngakho-ke sisodwa.
Uma kukhulunywa iqiniso, ngidumele ukuthi abakwaGoogle bangacabanga ukuthi kungumbono omuhle ukuthinta u-12% wayo yonke imiphumela yosesho ngobusuku obubodwa. Bangu izisulu kulolu bishi - abanye babo ababonisi abasebenza kanzima abafuna amaklayenti abo ukuthi abanikeze izeluleko ezingcono kakhulu. I-Google kuye kwadingeka ukuthi ihlehlise futhi iphinde izinguquko.
I-Google yethule ngolaka imboni ye-SEO ngisho nokwenza ngcono ukuzama ukuthuthukisa ikhwalithi yemiphumela yabo. Asizange siyidlale, njengoba I-CNN iphakamisa… Sonke safunda, saphendula futhi senza ngokuvumelana nezeluleko ezinikeziwe. Sisebenze kanzima ukwenza izincomo i-Google Ebuzwa kithi. Sikhokhele futhi saya emicimbini abantu abayithandayo Matt Cutts qhubeka nokukhuthaza. Sisebenze namakhasimende amakhulu futhi sawasiza ukuthi asebenzise ngokugcwele okuqukethwe kwawo… manje kuphela ukukhipha ukhaphethi ngaphansi kwethu. I-Google ikhomba kumasayithi afana ne-Wikipedia njenge izinga amasayithi… kepha ahlawulise amasayithi lapho okuqukethwe kuthengwa khona empeleni futhi abantu baqashelwe ukubhala. Hamba uyokubala.
-Google wenza ngidinga ukushintsha. Kodwa-ke, isimo esiguqukayo soshintsho nokungabikho kwesexwayiso ngasohlangothini lweGoogle bekungadingekile. Kungani iGoogle ingakwazanga ukumane ixwayise abashicileli abakhulu ukuthi kukhona i-algorithm ezosetshenziswa ezinsukwini ezingama-30 ezoklomelisa abashicileli abakhulu ngokwakha amakhasi abo ngokuningiliziwe nangekhwalithi? Kungani ungabuki kuqala ushintsho usebenzisa usesho olukhethekile noma imvelo ye-sandbox? Okungenani izinkampani bebengalungiselela ukwehla okukhulu kwezimoto, bahlukanise imizamo yabo yokuthengisa online, futhi bathuthukisa (okudingeka kakhulu).
Isibonelo esisodwa esithile yiklayenti engisebenza nalo. Besivele sakha ama-imeyili angcono, ukuhlanganiswa kwamaselula nezenhlalo - kanye ne-loop yokuphendula lapho abafundi bengakhombisa ikhwalithi yokuqukethwe abakufundayo ukuze kuthuthukiswe. Ukube besazi ukuthi kuzoba khona ukubuyekezwa kwe-algorithm okuzokwehlisa u-40% wethrafikhi yesayithi, besizosebenza kanzima ukwenza lawo masu aphile kunokuqhubeka i-tweak isiza. Manje silwela ukukwenza Thola.
Mar 8, 2011 ku-3: 36 AM
Awekho amasayithi ami alinyazwe ekubuyekezweni koMlimi. Akekho namaklayenti ami. Ngikholwa ukuthi lokhu kungenxa yokuthi ikhwalithi yokuqukethwe ibalulekile, kepha ikhwalithi negunya lezixhumanisi zalokho okuqukethwe kusabusa usuku. Kubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili ukuthi ezimbili zihlobana kanjani ngqo.
Ngikhombise isayithi elibhidlizwe phansi, mina futhi ngizokukhombisa izimbobo kuphrofayili yokuxhumanisa uma kuqhathaniswa nezinye ezikule niche ezuzile. Kwenzeka kanjena ngakho konke ukuvuselelwa, noma ngabe unikezwa liphi igama. Amasayithi “amakhulu” awalahlekelwanga… amasayithi abasemagunyeni kuphela angazange akwenze ngcono ukuma kwawo. Amasayithi “amakhulu” ayasuswa futhi, futhi lokho akusizi.
Ngaphezu kwalokho, ngikholelwa ukuthi izinkomba ze-algo zokuqukethwe kwekhwalithi ziphakanyisiwe futhi zifuna okungaphezulu kakhulu kwamagama "amahle futhi woqobo". Kunezici eziningana ezibandakanya ulimi olwamukelwayo lwe-niche, ukucatshangelwa kwe-AP Stylebook, ipulatifomu (i-blog noma i-static ngokwesibonelo) nesikolo sokufundeka.
Amasayithi asezingeni eliphakeme ashaywa ngempama (ezinearticles, mahalo) ayeyizisulu zenhlawulo yesandla. Benziwa izibonelo ngamabomu ukushukumisa umsindo. Lawa abuyekezwa ngabantu futhi abantu babandlulula… yingakho amanye amasayithi “amahle” afana neCult of Mac nawo abethelwe… Ngicabanga ukuthi abantu baseMac bayazikhukhumeza futhi bayazikhukhumeza futhi nami bengizoshaya isayithi ngeMac. I-LOL j / k
Mar 8, 2011 ku-9: 59 PM
Ngo-Apr 13, i-2011 ku-8: 40 AM
Ohh Yesss .. Ushintsho lwe-Google's “Panda” Algorithm Change .. http://www.hayatoglunakliyat.com
Sep 5, 2011 ku-6: 24 AM